Soosaarayaasha Midabka Photoluminescent - Shirkadaha Shiinaha ee Wax Soosaarka Midabka iyo Warshadaha ee Photoluminescent
Biyo-xareynta biyuhu ka samaysan yihiin ee budada mugdiga ah ee loo habeeyay rinjiga iftiinka sidoo kale loo yaqaan midabka-biyaha-biyaha-xayawaanka ah, budada biyaha-dhalaalaysa, midabka iftiinka ama iftiinka iftiinka, waa budo iftiin badan oo iftiinka iftiinka dheer leh ka dib waa midabka iftiinka loo yaqaan 'photoluminescent solid' iyadoo la nuugo nalalka kala duwan ee la arki karo hadana si isdaba joog ah ayaa loo isticmaali karaa. Alaabadaani kuma jiraan wax walxo shucuureed leh waxaana si siman loogu fidin karaa sida wax lagu daro da 'da' hufan ...
Alaabadaani kuma jiraan wax walxaha iftiimiya waxayna si siman ugu faafin karaan walxo muuqata sida daahan, khad, rinjiga, balaastigga, badarka, galaaska, fiber-ka si loo dardar geliyo howlaha soosaarayaasha. midabkeeda dabiiciga ah meelaha meelaha iftiinka leh wuxuuna soo saaraa midabbo kala duwan oo nalal mugdi ah.
Budada iftiinka dheer ee iftiinka dheer kadib waxay leedahay iftiin xoog leh iyo iftiin dheer kadib dhalaalaya, oo leh waxqabadka ugu wanaagsan iyo saamiga qiimaha ee gudaha Shiinaha, Alaabooyinka kuma jiraan wax walxaha iftiimiya waxayna si siman ugu faafin karaan walxo ka dhex muuqda wakiilada hufan sida daahan , khad, rinjiga, balaastigga, badarka, galaaska, fiber si aad ugu dhaqaaqdo howlaha soosaarka wakiilada. Midabka noocan ahi wuxuu ku qaataa midabkiisa dabiiciga ah meelaha iftiinka ah wuxuuna soo saaraa midabbo kala duwan oo nalal ah mugdi.
Midabkayaga dheer ee iftiinka dheer ee iftiinka loo yaqaan 'photoluminescent paint' waa strontium aluminium budada ah ee iftiinka ku shaqeeya ayaa iftiin u noqon doonta nuugista nalalka kala duwan ee la arki karo oo si isdaba joog ah ayaa loo isticmaali karaa. Alaabadaani kuma jiraan wax walxaha iftiimiya waxayna si siman ugu faafin karaan walxo muuqata sida daahan, khad, rinjiga, balaastigga, badarka, galaaska, fiber-ka si loo dardar geliyo howlaha soosaarayaasha. midabkeeda dabiiciga ah meelaha meelaha iftiinka leh wuxuuna soo saaraa midabbo kala duwan oo nalal mugdi ah.
Midabteena iftiinka dheer-dheer kadib ee iftiinka-luminescent-ka ayaa iftiin doonta iftiinka iyadoo la nuugo nalal kala duwan oo la arki karo oo si isdaba joog ah ayaa loo isticmaali karaa. Alaabadaasi kuma jiraan wax walxaha iftiimiya waxayna si siman ugu faafin karaan walxo ka dhex muuqanaya sida daaha, khad, rinjiga, balaastigga, badarka, galaaska, fiber-ka si loo dardar geliyo howlaha soosaarayaasha wakiilada.
Midab deg deg leh oo midab leh liinta
Si fudud oo xamaasad leh, raadis qiime sare leh qiime-sare sare ka dib-iftiinka strontium aluminium kuxiran midabaynta iftiinka Sharaxaadda sida midabka soo socda: Jiilaalka-cagaaran taxanaha Sheyga / Koodhka Iftiiminta （mcd / m2） Waqtiga-dambe ee Daqiiqada Min Qaddarka Walxaha (ee um D50) Maaddada ugu badan dhexroor 1 Min 10 Min 60 Min Dmax (um) <RBG-60DJ101S 'RBG-601DJ101S 4000 650 65 8000 75 ~ 85 120 RBG-602DJ102S 3300 450 ...
Biyo-celin aan biyuhu ku dhex-eynin Madoolaatada Madoow ee loogu talagalay iftiiminta rinjiga mugdiga ah
Iftiin iyo cimri dheerIn ka yar toban sano Nolol-sun ah iyo waxyeello lahayn-cagaar, cagaar-buluug, cod-buluug-buluug iwm. AvaiableAluminate budada luminescent budada
Powoluminescent Powder loogu talagalay iftiinka ku saleysan biyaha ee rinjiga madow
Biyo-la’aanta biyuhu ku saleysan tahay ee budada mugdiga ah waxaa loo habeeyey isticmaalka rinjiga ku saleysan biyaha, waxay leeyihiin cabbirka unugyada ku habboon ee sameynta rinjiga iyo biyaha u adkeysan kara, waxay leeyihiin astaamaha soosocda: Nidaamka biyaha-biyaha ee loogu talagalay waxa rinjiga salka ku hayo, caabbinta biyaha deggan.
Alaabadaasi kuma jiraan wax walxaha iftiimiya waxayna si siman ugu faafin karaan walxo ka dhex muuqanaya sida daaha, khad, rinjiga, balaastigga, badarka, galaaska, fiber-ka si loo dardar geliyo howlaha soosaarayaasha wakiilada.